दक्षिण कोरियामा जनसङ्ख्या घट्दै ! – Korea Pati
June 4, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दक्षिण कोरियामा जनसङ्ख्या घट्दै !
दक्षिण कोरियाको जनसङ्ख्या क्रमिकरूपमा घटेको छ ।
दक्षिण कोरियाको आन्तरिक तथा सुरक्षा मन्त्रालयको एक तथ्याङ्कअनुसार गएको डिसेम्बरमा ५१।८५१ मिलियन रहेकोमा मे अन्तिमसम्ममा जनसङ्ख्या ५१।८४१ मिलियनमा झरेको छ ।
मृत्युदर्ता, जन्मदर्ता तथा बसाइँसराइलाई आधार मानि सार्वजनिक गरिएको सो तथ्याङ्कमा १० हजार ५६ ले घटेको हो । उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै गत फेब्रुअरीमा दुई हजार ८८२ ले घटेको छ भने सबैभन्दा कम अप्रिलमा ७७१ ले घटेको छ ।
कोरियामा यसभन्दा अघि सन् २००८ को मार्च र २००९ को अप्रिलमा पनि जनसङ्ख्या केही घटेको थियो भने एक दशकयता भने निरन्तर बढ्दो क्रममा थियो ।
मापदण्डअनुसार प्रवेशाज्ञा लिँदा ४८ घण्टाभित्र अनिवार्यरूपमा उक्त देशको सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट स्वास्थ्य जाँच गरेको रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने जनाइएको छ । रिपोर्टमा ज्योरो, रुघाखोकी, शरीर चिलाउने, टाउको दुख्ने, स्वासप्रस्वाससम्बन्धी समस्या आदिको लक्षण भए÷नभएको अनिवार्यरूपमा खुलेको हुनुपर्ने छ । रिपोर्ट कोरियन वा अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने र मान्यताप्राप्त चिकित्सकको हस्ताक्षरसमेत भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
दक्षिण कोरियाको ह्वासाङ्ग ब’न्दी गृहमा रहेका अवैधानिक विदेशीलाई चरम या’तना दिएको पुस्टी !
November 3, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
दक्षिण कोरियामा ठ’गी धन्दा भोईस फिसिङ बढदो,फस्दैछन नेपालीहरु !
January 2, 2022 January 2, 2022 गुरुदत्त न्यौपाने